Sakafo an-dalambe ao Vietnam · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Aogositra 2018 18:11 GMT
(Lahatsoratra efa tamin'ny volana Jiona 2007)
Ahitana fanambarana kely mampikorontan-tsaina ireo mpankafy sakafo Vietnamiana an-dalambe ao anivontany Vietnamiana ao Hoi An ny lahatsoratra bilaogy iray tsy tokony heverina ho tsotra momba ny varin'akoho (com ga). Rehefa avy nanoritsoritra ny sakafon'akoho, nanoratra i Stickyrice, bilaogera hatry ny ela monina ao Hanoi hoe:
“Indrisy, nampahafantatra anay ny mpivarotra, fa ity no alina farany amin'ny sakafo an-dalambe tao amin'ny tanàna fahiny noho ny lalàna vaovao mandràra ny fibahanan-dalana ary hanan-kery tsy ho ela. Voatery mifindra any amin'ny toerana sahaza na any amin'ny toerana maizimaizina ireo mpivarotra ireo.”
Moa ve fikasana hafa hanery ireo lalana vietnamiana ho ao anatin'ny endrika maoderina Singapaoreana izany? Na ho famonoana ho faty ny sakafo an-dalambe Vietnamiana? Bilaogera iray hafa momba sakafo Eating Asia mitaraina amin'ny fanehoan-kevitra amin'ity lahatsoratra ity: “Heveriko fa lalana tsy misy mpivarotra no hanjaka amin'ny ho avy ao Azia … tsapako ny fahorianareo.”
Indrisy fa matetika ny sakafo an-dàlambe no lasibatry ny lalan'ny “fandrosoana” any amin'ireo firenena izay mahita ny fiainana an-dàlambe mikorontana ho toy ny ozona faratampony amin'ny fampandrosoana. Indraindray eo amin'ny endrika no antony (manaratsy endrika ny arabe ireo mpivarotra sakafo an-dalambe); indraindray noho ny tsy fisian'ny fahadiovana tsotra izao no antony.
Lahatsoratra iray vao haingana tao amin'ny Nhan Dan, gazety ofisialin'ny Antoko Komonista ao Vietnam, nanambara fa hisy ny “famoretana manerana ny firenena ho an'ireo tsy manaja ny fiarovana ara-tsakafo sy ny fananganana fenitra ho an'ny fahadiovana ara-tsakafo amin'ny ankapobeny”. Nampilaza ireo tetikasa mikendry hampitombo ny fanarahamaso ara-tsakafo sy sazy henjana kokoa ho an'ireo mpandika lalàna ny lahatsoratra amin'ny teny Anglisy.
Toa mamaly ireo ahiahy momba ny fiarovana ara-tsakafo indostrialy amin'ireo sakafo malaza amin'ny vaovao momba an'i Shina ity hetsika fanentanana ity (ohatra nolazain'ny lahatsoratra ny sakafo toy ny saosy saozaha misy otrikaretina). Mbola tsy fantatra hatramin'izao ny mety ho fiantraikan'izany famoretana izany amin'ny fomban-drazana manan-danja amin'ny sakafo an-dalambe any Vietnam.
Antenaina fa hankatoa ny soatoavina ara-kolotsaina manan-kery ny governemanta Vietnamiana – tsy lazaina intsony ny tombony ara-pizahantany – amin'ny sehatra sakafo an-dalambe velona ao amin'ny firenena, ary mahita fa tsy voatery ho mifanohitra amin'ny fomban-drazana sakafo an-dalambe ny fandrosoana sy ny fiarovana ara-tsakafo.